मन्त्रीपरिषद्बाट संशोधित वाफिया स्वीकृत - Wnepal.com::
साेमबार, अशोज ६, २०७६
मन्त्रीपरिषद्बाट संशोधित वाफिया स्वीकृत
बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि विधेयक मन्त्रीपरिषद्बाट स्वीकृत भएको छ । रकारका प्रवक्ता सूचना तथा संचारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले मन्त्रीपरिषद्ले गरेको निर्णय सार्वजनिक गर्दै वाफिया पास गरेको जानकारी दिएका हुन् । अब अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बाफिया विधेयक संसदमा टेबुल गर्ने भएका छन् ।
नयाँ बाफियामा बैंक र ब्यवसायी छुट्याउने प्रावधान राखिएको छ । ऐन परिमार्जन भएर आउँदा उद्योग धन्दा गर्ने वा व्यवसायिक क्षेत्रमा रही कर्जाको कारोबार गर्ने व्यक्ति सञ्चालकहरुमा बस्न पाउने छैनन् । यसका साथै सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुको उमेर हद पनि तोकिएको छ । प्रमुख कार्यकारीले ६५ र सञ्चालकले ७० बर्षभन्दा बढि बैंकमा काम गर्न नपाउने ब्यवस्था लगायत अन्य धेरै प्रावधानहरु संशोधित वाफियामा समेटिने बताइएको छ ।
सरकारले तरलता संकट र व्याजदर नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंकका मौद्रिक उपकरणहरूले काम नगरेपछि बाफिया नै परिवर्तन गर्न लागेको जनाएको छ । ऐन परिमार्जनको तयारीमा मै राष्ट्र बैंकले क्रस होल्डिङ भएका बैंकको सूची समेत तयार पारेको स्रोतको दाबी छ ।
निश्चित प्रतिशतभन्दा बढि शेयर भएका लगानीकर्ताहरुले बैंकबाट ऋण लिन पाउने छैनन् । यदि ऋण लिएमा उनीहरुले बैंकको सञ्चालक समिति छाड्नु पर्ने हुन्छ ।
पहिलो पटक बाफिया २०७३ पुस १३ गते संसदबाट पारित भएको थियो । उद्योगीहरुले नै बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या देखिएपछि उक्त वाफिया आएको तीन बर्षमै फेरि संशोधन गर्न लागिएको हो ।
एन आई सी एशिया र सगरमाथा इन्स्योरेन्सबीच सम्झौता
कुमारी बैंकद्वारा खेलाडी सम्मान
प्रहरीलाई कम ब्याजमा ऋण दिइने
बैंकर तथा पूर्व सीइओ अजय श्रेष्ठसहित ११ जना कर्मचारीलाई पक्राउ
विद्युतको नौ करोड बक्यौता
संविधान दिवसका अवसरमा तीन पुरस्कृत
१० अर्बको ट्रेजरी बिल बिक्री गर्दै राष्ट्र बैंक
एन आई सी एशियाका ग्राहकलाई भाटभटेनी सुपरमार्केटमा दशैं–तिहारमा छुट
नेशनल लाईफका २३७ जना अभिकर्ता सम्मानित
सनराइज बैंकद्वारा क्याम्पसलाई सहयोग
व्यक्तिगत स्थायी लेखा नम्बर लिने बढे
कार्डबाट कारोबार गर्नुस् भ्याट छुट लिनुस्
मेलिको कमब्याक मैथिली गीतको भिडियोबाट
हिरो नं. १ युरोपका दर्जनौं देशमा प्रदर्शन हुँदै
भारत र कोरियाबाट प्रभु बैंकले रेमिट्यान्स ल्याउने, २१ हजार खाता खोलिने
विश्व प्रेस काउन्सिलको महासचिवमा नेपाल चयन